အူဘာမီယန်အတွက် ညှိနှိုင်းရန် ဒေါ့မွန်သို့ ဂါဇီဒစ် ရောက်ရှိနေ၊ ငွေကြေးကြောင့် အသင်းမှ ဆန်းခ?? - Yangon Media Group
အူဘာမီယန်အတွက် ညှိနှိုင်းရန် ဒေါ့မွန်သို့ ဂါဇီဒစ် ရောက်ရှိနေ၊ ငွေကြေးကြောင့် အသင်းမှ ဆန်းခ??
အာဆင်နယ်အသင်းအမှု ဆောင်ချုပ်ဂါဇီဒစ်သည် ဂါဘွန်တိုက်စစ်မှူးအူဘာမီယန်ကို ခေါ်ယူရေး ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန် ဒေါ့မွန်သို့ရောက်နေကြောင်းသိရသည်။ အာဆင်နယ်သည် ချီလီတိုက်စစ်မှူးဆန်းချက်ဇ်နှင့် အာမေးနီးယားကွင်းလယ်လူ အမ်ခီတာယန်တို့ကို ကစားသမားချင်း တိုက်ရိုက်လဲလှယ်ရန် သဘောတူခဲ့ပြီး နောက် တိုက်စစ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းရန် အူဘာမီယန်ကိုထပ်မံခေါ်ယူလိုနေခြင်းဖြစ်ပြီး အစောပိုင်းက အာဆင်နယ်က ကမ်းလှမ်းထား သော ပေါင် ၄၄ သန်းကို ဒေါ့မွန်က ပယ်ချထားခဲ့ကြောင်း Dailymail သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အူဘာမီယန်မှာ အာဆင်နယ်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များသဘောတူထားပြီးဖြစ်သည်ဟု သတင်းများထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အာဆင်နယ်မှာ ဒေါ့မန်နှင့် ဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ရန် အမှုဆောင်ချုပ်ဂါဇီဒစ်အား ဒေါ့မွန်သို့ စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဂျာမန်သတင်းစာ Bild ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဂါဇီဒစ်သည် ကစားသမားစာချုပ်များအတွက် ညှိနှိုင်း ရေးမှူး၊ ကင်းထောက်ချုပ်တို့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန် ရောက် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အာဆင် နယ်နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါးက အသင်းမှာ ဆန်းချက်ဇ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ကစားသမားအနေဖြင့် ငွေကြေးကြောင့် အသင်းကို စွန့်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
မန်ယူအသင်းသည် ဆန်းချက်ဇ်ကို အမ်ခီတာယန်နှင့်တိုက် ရိုက်လဲလှယ်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာတွင် ကစားသမားအား တစ်ပတ် ပေါင် ၄၅ဝ,ဝဝဝ ရရှိမည့်လစာဖြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းက အာဆင်နယ်ကိုသာမက ဆန်းချက်ဇ်ကိုခေါ်ယူလိုနေသော မန်စီးတီးအတွက်ပါ အခက်တွေ့စေခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် လက်လွှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဝင်းဂါးက ပြောသည်။
ဝင်းဂါးက ”ဘာကြောင့် အာဆင်နယ်က ထွက်ချင်နေကြသလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိ ပေမယ့် အပြောင်းအရွှေ့တွေကို နှစ်ပေါင်း ၃ဝ လောက် ကြုံလာပြီးနောက်မှာ လူတွေအကြောင်း အများကြီးသိလာပါပြီ။ ပ ရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးအတွက် ဒီစာချုပ်ဟာ ဆန်းချက်ဇ်အတွက် ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ နောက်ဆုံးစာချုပ်ဖြစ်နိုင်တာ ကြောင့် သူ့ကိုလက်လွှတ်ဖို့ဆုံး ဖြတ်လိုက်ရတာပါ။ နောက်ဆုံး မန်စီးတီးလိုအ သင်းကတောင် လက်လျှော့သွားတာ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က သူ့ကို ဆက်ထိန်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အသင်းမှာ သူဆက်ရှိမလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတဲ့ မသေချာမှုတွေက အသင်းအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
နည်းပြသစ်အဖြစ် ဂျာဗီဂါစီယာကို ဝက်ဖို့ဒ် ခန့်အပ်